Jereo eto | Tsidiho i Hultsfred
Home » Jereo eto
Ny Kaominin'i Hultsfred dia any Småland sy atsimo atsinanan'i Suède. Afaka mandeha any amin'ny Vimmerby sy Astrid Lindgren's World ianao afaka antsasak'adiny. Tonga amin'ny fanjakan'ny vera ianao afaka adiny iray mahery.
Ora latsaka ny adiny telo sy sasany vao hitondra anao avy any Stockholm, Gothenburg na Malmö mankany Hultsfred.
Linköping, Jönköping, Växjö ary Kalmar dia renivohi-paritany lehibe kokoa. Ho an'ireto dia mila fiara adiny iray sy sasany eo ho eo. Any amoron'ny ranomasina no misy an'i Kalmar ary raha te-handroso mankany Öland ianao dia latsaky ny antsasak'adiny ny halavany.
Afaka mandeha lamasinina mankany Hultsfred ianao. Manana fifandraisana amin'i Linköping sy Kalmar izahay.
Ny seranam-piaramanidina akaiky indrindra dia azo jerena ao Växjö, Kalmar, Linköping na Jönköping.